Abalunganga ... Awuyithengisi ngokwaneleyo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 24, 2015 NgoLwesine, uJuni 25, 2015 Douglas Karr
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ngendicebise abantu ngokuchasene ne-tweeting kakhulu. Ngapha koko, yayisisizathu esiphambili Kutheni abantu bengakulandelanga kwi-Twitter. Ngokukhawuleza phambili kwiminyaka embalwa kwaye i-Twitter isukile kwii-chirps ezimbalwa ngeyure ukuya kukugquma kwe-autopost, ii-akhawunti ezingezizo, i-spammers, kunye nolwazi kwisantya esingenakucolwa nakweliphi na inqanaba lokukhululeka.
Inyani yile, ukuba uzama ukufumana ingqalelo kwigumbi elikhulu, kuya kufuneka uphakamise ilizwi lakho okanye uqhubeke uziphinda. ITwitter ligumbi eliphezulu… ngokungenangqondo.
Ndiyaqhubeka nokufunda Mithetho malunga ne-Twitter kwi-intanethi. Imithetho iyaqhubeka nokupapashwa malunga elona xesha lilungileyo lokuTweet kwaye UkuTwitter kakhulu. Ndithathe isigqibo sokuvavanya ezi Mithetho. Ngapha koko, khange ndenze nje uvavanyo oluncinci, ndivuthele i-Twitter.
Ngaba ndiyathanda ukukhala kwigumbi elikhulu? Hayi. Ngaba ndiyathanda ukuphinda-phinda? Hayi… ndiyithiyile. Kwaye ndiqinisekile ukuba abanye abantu bazakundixelela ukuba ingcebiso endiza kuyinika iza kongeza kwingxaki kwaye ayizukunceda ukuyisombulula.
Ingxaki ayingobantu abafana nam. Ingxaki ligumbi. Yonke imihla kangangeminyaka emininzi, bendithatha inxaxheba kwi-Twitterverse kwaye ndizama ukubonelela ngexabiso, ukonwaba, uncedo kunye nencoko. Ngexesha elide, nangona kunjalo, ndidiniwe yi-Twitter. Ndivula ukutya kwam kwaye ipesenti encinci yencoko inexabiso.
Phantse yonke imihla ndibhloka ugaxekile. Xa ndijonga iphepha labo, banomyalezo omnye ophindaphindwe kalikhulu. Ngokuzimisela, kunzima kangakanani kwi-Twitter ukubeka icebo lokucoca ulwelo kwiiakhawunti ukuqinisekisa ukuba abaphindi umyalezo wabo?
Ke, de i-Twitter ithathe isigqibo sokwenza okuthile malunga nomgangatho kunye nobungakanani bolwazi ekwabelwana ngalo nge-Twitter, ndithathe isigqibo sokuyaphula Mithetho oogxa bam kwimidiya yoluntu. Owu… kwaye iyasebenza.
UkuThumela iiYure nganye, iiyure ezingama-24 ngosuku
UJenn wandazisa nge-WordPress enkulu ebizwa ngokuba yi-plugin Ukubuyisela i-Old Post. Ngelixa kukho uhlobo lwasimahla, ndingacebisa kakhulu ukuhlawulela amanqaku ongezelelweyo afakwe kuhlobo oluhle kakhulu lwePro. Inguqulelo inempawu ezininzi zeetoni kwaye inyusa amandla okutyhala umxholo wakho ngomfanekiso obonisiweyo ngokuthe ngqo kwiWindowsPress. Iplagi ikwavumela Bit.ly indibaniselwano ukuze ukwazi ukulinganisa inqanaba lokucofa kwiikhonkco ekwabelwana ngazo.
Nanku umzekelo wendlela elibonakala ngayo iKhadi le-Twitter
Jonga indawo yethu eNtsha… kunye nezixhobo zethu eziNtsha http://t.co/UWExub2Dy7 #umxholo # igama pic.twitter.com/MHVgN5zIY6
-Itheknoloji yeNtengiso (@martech_zone) Juni 24, 2015
Ndicwangcise iplagi ukuba ithumele umxholo ongakhethiyo kunyaka ophelileyo iyure nganye kwi-Twitter. Ngelixa bendihlala ndibeka 2 ukuya ku-4 uhlaziyo ngosuku, ngoku bendipapasha ama-24 ukuya kuma-30 amaxesha ngosuku. Ngomsindo ongaka, ucinga ukuba ndiza kuphulukana nabo bonke abalandeli bam kwaye ndiqhube ukuzibandakanya kwam etankini. Hayi.
Iziphumo zokuTwitter kakhulu
Izibalo azixoki kwaye i-Twitter Analytics kunye nendawo yam yeGoogle Analytics indixelela ukuba le yinto entle! Nalu ulwaphulo:
Inqanaba lokuzibandakanya Ukusuka kwi-0.5% ukuya ngaphezulu kwe-2.1%!
Iimpawu zeeTweet PHAKATHI kwe-159.5% ukuya kuma-322,000.
Ukutyelela iProfayili PHAKATHI kwe-45.6% ukuya kuma-2,080.
abalandeli NGU-216 ukuya kuma-42,600.
Iifayile PHAKATHI kwe-105.0% ukuya kuma-900.
IiTweets ezinxibelelana nawe PHAKATHI kwe-34.3% ukuya kuma-6,352.
Ukugcwala kweSiza kuTwitter UP 238.7% ukuya kutyelelo lwe-1,952.
Andiqinisekanga ukuba ndingaphikisana njani nezi zibalo. Andilahlanga abalandeli, ndafumana abalandeli. Andilahlanga ukubandakanyeka, iphindwe kane. Khange ndilahlekelwe kukutyelelwa kwesiza, baphindaphindwe kabini. Onke ama-metric akhomba kwinto yokuba, ngokwandisa kakhulu inani lee-tweets ezipapashiweyo, ndiyiphucule kakhulu intsebenzo yam kwi-Twitter.
Ngoba? Kubonakala kucace gca ukuba, ayisiyi kundikhathaza kuphela abalandeli bam bangoku, ii-tweets zam zibonwa ngakumbi, ziphinda zenziwe kwakhona, kwaye zicofa ngakumbi. Ukuba bendinokwenza umlinganiso, ibiya kuba uqhuba ezitalatweni kuxinano lwezithuthi kwaye i-tweet yibhodi yezaziso. Amathuba okugcwala kwebhodi yakho yebhodi mhle kakhulu. kodwa ukuba unokubeka ibhodi yezaziso yonke imayile okanye njalo, amathuba okubonwa angcono kakhulu.
Sukuxhomekeka kumzekelo wam wokungxola ingxolo yakho kwi-Twitter. Khumbula ukuba ndabelana nje namakhadi e-Twitter ngomxholo wexabiso rhoqo. Andiyi koyika ukwabelana ngokuchanekileyo ngokufanayo ngeTweet ngaphezu kweyodwa ngosuku. Amathuba kukuba abalandeli bakho abayi kuyibona ngaphezulu kwesinye. Zama ukuphinda kabini inqanaba lokupapasha i-Twitter kwaye ubone ukuba liyichaphazela njani kubahlalutyi. Ukuba iyasebenza, zama ukuphinda kabini kwakhona. Ndazise ukuba kuhamba njani kumagqabantshintshi.
Ukwazisa: My Ukubuyisela i-Old Post ikhonkco likhonkco elidibeneyo. Ndiyithandile kakhulu kangangokuba ndikhawuleze ndasayina ubambiswano nabo.
tags: Ngokuzenzekelayouvuselele iposti yakudalaukuvuselela iposti endalaIshedyuli yamagama entlalontleukudityaniswa kwamagama entlalontleTwitterisigama sentlalo
Jul 5, 2015 ngo-11: 45 PM
UTwitter noFacebook bayitshintshile indlela abanxibelelana ngayo abantu kumaxesha anamhlanje….